Odisha Tours sy Travel | Tarifa fampiasana fiara an-trano sy fiara
Alaivo ny fiaranay sy ny fiaranay
Manolotra fiaran-dalamby sy fiaran-dalamby izahay mba hampitombo ny traikefanareo ary ahafahanareo mahazo ny tsara indrindra amin'ny fotoananao. Ny laharam-pahamehantsika voalohany dia ny fahafaham-po.
Manararaotra ny fotoana ahitanao ny sasany amin'ireo toerana malaza ao Bhubaneswar sy ny manodidina azy raha mitsidika an'i Odisha ianao.
FANALAVAM / HR
FANALAVAM / KM
1 Dzire na mitovy 850 1500 140 14
2 Scorpio na mitovy 1000 1800 160 16
3 BRV na mitovy 1200 2200 200 20
5 Tanànan'i Honda 1600 2600 260 25
8 Audi-A3 na BMW-X1 5000 10000 900 90
BATA: 200 ho an'ny Sl #1 mankany 6, ary 300 ho an'ny 7 ho 9
Fanomezana alina (22: 00 ho 06: 00 Hrs): Rs. 200 ho Sl # 1 mankany 6, ary Rs. 300 ho 7 mankany 9
Nigh Halt Outstation: Rs. 300 ho Sl # 1 mankany 6 sy Rs. 400 ho 7 mankany 9
Kilometatra & ora hanombohana sy hamita ny toerana misy anay (Garage To Garage)
Taorian'ny 4 Hrs / 40 Kms slab, nahazo alalana 30 minitra ny alalana. Ho an'ny fanitarana hafa ankoatra ny takelaka voalaza, ny 8 Hrs / 80 Kms ny takelaka dia ampiharina. Rehefa vita ny 8 Hrs / 80 Kms ny takelaka, ny KM / Hour fanampiny dia ampangaina araka ny Taratin'ny Transport.
Tolo-ketra, takam-pandaminana sy fiara fitateram-bahoaka dia ampangaina mihoatra noho ny zava-misy + GST: 5%.
Ho an'ny andraikitra ivelan'ny toerana, ny halavam-potoana faratampony dia ho zaraina 250KMs isaky ny daty fandaharam-potoana na ny lavitra lavitra, na iza na iza ambony. Ny isam-piraisana dia tokony ho isaky ny tarika KMm isan'olona.
Ny fiatoana A / C dia azo alaina amin'ny fototra avy amin'ny mpanohana.
Ny latsak'aina voalaza etsy ambony dia hodinihina raha misy ny fiakaran'ny vidin'ny solika sy ny hetra amin'ny hetra.
Mpivarotra A / C Luxury
dia misy ihany koa.
ho amin'ny antsipiriany bebe kokoa sy ny fampahalalana
Fanairana SMS maimaim-poana ho fanamafisana ny famandrihana.
Fanairana SMS / mailaka fanamorana ny Vehicle & Chauffeur alohan'ny 02 ora ny Pick-up.
Daily News Paper, tavoahangin-drano mineraly, elo, kitapom-bola voalohany, kitapo miloko ary tavy vita amin'ny tavy vita amin'ny mainty vita amin'ny kamiao rehetra.
Ny fiara rehetra dia ny rivotra madio, tsy mifoka sigara, madio ary madio.
Ho an'ny famelombelomana, snacks, Fruits & Juice dia hikarakara ireo solontenany amin'ny fangatahana fiampangana fanampiny.
Ny mpamily sy / na ny mpiasan'ny seranan'i Sand Pebble dia niorina niaraka tamin'ny Welcome Placard tao amin'ny seranam-piaramanidina / gara mba handraisana vahiny sy ny fiaramanidina.
Sand Pebbles Tours dia nanome fiara matihanina matihanina, manaiky, matihanina ary mahafantatra ny lalana sy ny fanamafisana orinasa.
Ireo ko-ordinateur mahomby dia voatantarina amin'ny toerana hanaovana ny fepetra takian'ny mpanjifa amin'ny hetsika sy ny fihaonambe.
Ny manodidina ny fiambenana fiara-miasa dia misy ho an'ny Corporate sy Executive Travels, fitsangatsanganana, fitsangatsanganana sy hetsika manokana.
Ny serivisy fiara-manamboatra manokana dia azo atao amin'ny fampakaram-bady.
Ny tsipiriany ao amin'ny Guest dia voatahiry ao amin'ny Data-base mba hanomezana tolotra tsaratsara kokoa amin'ny baiko manaraka.
Tsy maintsy atao alohan'ny 24 ora ny famandrihana fiara. Na izany aza, ny birao Sand Pebbles Operations dia azo ifandraisana raha toa ka ilaina ny fiara mandritra ny ora 24.
Raha mametraka famandrihana amin'ny onjam-peo, ny fampahalalana rehetra amin'ny endrika voatokana dia tokony homena.
Ny famandrihana an-tserasera dia manohy manara-penitra tsy tapaka. Na izany aza, ny Governemanta azo ampiharina. Ny hetra, ny saram-pisiana, ny fandoavana ny fiaramanidina ary ny fahazoan-dàlana hifehezana ny fahazoan-dàlana dia tsy maintsy aloa amin'ny mpampiasa amin'ny fotoana iasana amin'ny cab.
Ny famandrihana sy ny fifanakalozan-drivotra natao tamin'ny alàlan'ny tranonkalan'ny Sand Pebbles dia mety amin'ny fanarenana ny Sand Pebbles. Sand Pebbles dia manana fanamarinana hanenenana ny famandrihana voamarina araka ny antony tsy azo ihodivirana.
Ny saram-pandraharahana amin'ny 15% amin'ny sandan'ny faktioram-bidy dia voampanga raha nofoanana ny famandrihana 06 ora aloha. Raha vao nivoaka ny garage ny cab, ny karazana tombony dia azo alaina amin'ny vahiny.
Rehefa vita ny famandrihana On-Line dia azonao atao ny manamarina ny toeranao amin'ny alàlan'ny serivisy 24Hrs.